Geeddi-Socodka Hannaanka Somaaliland, Xaggee Hayaanku Foolka Ku Hayaa? Qaybta 5aad, Qalinkii Xassan Cumar Hoorri | Baligubadlemedia.com
Prunier, kal hore, waxaa uu yimid Hargeisa. Waxaana uu madal ka soo jeediyay, aragtidiisa ku saabsan tubta loo mari karo aqoonsiga. “Somaaliland waxaa ay
buuxisay dhammaan shuruudaha looga baahnaa dal madax-bannaan, dimuqraadi ah, weliba nabad qaba”. Balse, waxaa uu ku ladhay, “nasiib-darro, ha ka sugina adduunka inuu idinku abaaliyo ictiraafka dalkeennu mudan yahay”!